CXD iyo Kuwa Mareykanka oo Al-Shabaab Kasoo Furtay Dad ay Afduub u Heysteen – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
Jubba-land oo Sheegtay in Shabaab ay Ka Faa’ideystaan Mashquulka+Dhageyso
Wajiis:-“1995tii Ayaan Ogaaday Danta Mareykanka ee Galmudug”,+Dhageyso
DFS oo Sheegtay in La Tayeeyay Adeegyada ay Helayaan Xujeyda Soomaalida
Taliyayaasha Booliska Gobolka Banaadir iyo Saraakiil kale oo La Dallacsiiyay
Faah-faahin:-Qarax Ka Dhacay Degmada Hodan
Dowladda Kenya oo Sheegtay in La Dilay Xubno Ka Tirsanaa Xarakadda Al-shabaab
Faah-faahin:-Askari Ka Tirsan Dowladda oo Dilay Laba Wiil oo Walaalo ahaa!
Ciidamo Ka Tirsan Kuwa Ethopia oo Lagu Qarxiyay Deegaanka Halgan
CXD iyo Kuwa Mareykanka oo Al-Shabaab Kasoo Furtay Dad ay Afduub u Heysteen
Warar dheeri ah ayaa laga helayaa howlgalo qorsheysan oo si wadajir ah ay u fulinayeen ciidanada kumaandooska iyo kuwa xoogga dowladda Soomaaliya oo garab ka helaya ciidamada AMISOM iyo kuwa Mareykanka ee howlgalada kala duwan ka fuliya gudaha dalka Soomaaliya.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay howlgaladaasi iney ka dhaceen tuulooyin iyo deegaano hoos yimaada degmooyinka Afgooye iyo Balcad oo ka kala tirsan gobalada Shabeelaha dhaxe iyo shabeelada hoose ee Koonfurta dalka Soomaaliya.
Howlgalka ayaa waxaa si wadajir ah u fulinayay Guutooyinka koowaad iyo 2-aad ee ciidamada Xoogga dowladda Soomaaliya oo ka dhaqaaqay dhanka degmadda Balcad ee gobalka Shabeellaha dhaxe, halka dhanka degmada Afgooye ay ka dhaqaaqeen ciidamada Baangaraafta iyo kuwa Military-ga Mareykanka oo garabka gadiidka dagaalka iyo ciidamo toos ah ka helayay ciidamada AMISOM.
Warka kasoo baxay dowladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay howlgalkaasi in lagu soo furtay shaqsiyaad ku jiray xabsiyada Al-shabaab, oo maanta lagala wareegay tuulooyinka lagu kala magacaabo Buulo Kuunte, Baliga baaloow, kala wareega,ilaa Aseendada Aadan Seeraar.
Sarkaal katirsan ciidamada dowladda ee gobalka Shabeelaha dhaxe oo lagu magacaabo Cali Maxamed Xasan oo ladlay Idaacada Simba xarunta magaalada Muqdisho ayaa faah faahin ka bixiyay qaabka loo qorsheeyay howlgalkaasi, goobaha ciidamada dowladda kuwa Amisom iyo ciidamada military-ga USA ee maanta kala wareegeen ciidamada Xarakada Al shabaab ee Soomaaliya.
Sarkaalka ayaa intaa ku daray howlgalka in looga furtay Al shabaab hub kala duwan oo iskugu jiray qorayga PKM-ka, rasaasta Hoobiyaha oo gaareysa ilaa 35 Baalooto iyo ducumentiyo qoraalo u badan.
Dhanka kale wax war ah kama soo bixin Xarakada Al shabaab oo ku aadan jiritaanka warkan
Wali majirto cid ka madax banana oo xaqiijin karta warka kasoo baxay dowladda ee lagu sheegay in deegaano iyo tuulooyin lagala wareegay Xarakada Al shabaab, lagana helay feelal dacwado u badan.